Search Eng Sub Fai Ruk Game Rohn (Fiery Love Burning Game) Ep3Full - BajarFB.com
Search Results - Eng Sub Fai Ruk Game Rohn (Fiery Love Burning Game) Ep3Full
Lom Sorn Ruk (Winds Of Hidden Love) Ep3Full Eng Sub
Lom Sorn Ruk (Winds Of Hidden Love) Ep3Full Eng Sub Delisha Syaf 25 Mar 2019 · 20K views
Game rai game ruk part 8 nadech&yaya
Game rai game ruk part 8 nadech&yaya Nadech Yaya Love NY 27 Jun 2017 · 4.7K views
Barb Ruk/Sin of Love [ENG SUB] EP 3
Barb Ruk/Sin of Love [ENG SUB] EP3ENJOY! 1fanthailakorn 19 Nov 2018 · 17K views
Lom Sorn Ruk (Winds Of Hidden Love) Ep 14 FINALE Full NO ENG SUB
Lom Sorn Ruk (Winds Of Hidden Love) Ep 14 FINALE Full NO ENG SUB Delisha Syaf 30 Mar 2019 · 31K views
Game Sanaeha (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး EP 9-1 နောက်လူကြည့်ရအောင် up ပေးခဲ့ ဇာတ်​လမ်း​အကျဉ်း​လေးက​တော့ Nok(P’Taew)ကလှပထက်​မြက်​ပြီးခေါင်းမာတဲ့မိန်းက​လေး​တစ်​​ယောက်​ပါ မိဘ​တွေရဲ့ကွာရှင်းပြတ်​ဆဲခဲ့ခြင်း​ကြောင့်​ ဒီ​လိုဖြစ်​​နေတာပါ ဒါတင်​မကပါဘူး Nokရဲ့ဖခင်​ကလည်းငယ်​ရွယ်​တဲ့မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့လက်​ထပ်​ခဲ့ပြီး မိခင်​ကလည်း​နောက်​အိမ်​​ထောင်​ပြုသွားခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​တွေ​ကြောင့်​Nokဟာ အချစ်​ကိုအယုံကြည်​မရှိဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​ Nai(P’James Ji)က​တော့သူ့မိသားစုအရှုပ်​အရှင်း​တွေ​ကြောင့်​ Nokတို့အိမ်​မှာလာ​နေခဲ့ပါတယ်​ (ဘာပြဿနာမှန်း​တော့မ​ပြောထားပါဘူး) Nokက Naiကိုကြည့်​လို့ရ​နေတာ​တော့မဟုတ်ပါဘူး Nok ကို Naiနဲ့လက်​ထပ်​ဖို့အတင်းအကျပ်​ဖိအား​ပေးတဲ့အခါ….(Naiက​တော့ Nokကိုချစ်​​နေခဲ့ပြီ​လေ) လက်​ထပ်​ပြီးတဲ့​နောက်​မှာ​တော့ Naiကိုကွာရှင်းဖို့ပဲ Nokတစ်​​ယောက်​ကြံစည်​မိ​နေခဲ့ပါတယ်​ မထင်​မှတ်​ပဲကိုယ်​၀န်​ရလာတဲ့အခါ Nokတစ်​​ယောက်​ Gameတစ်​ခုဖန်​တီးလိုက်​တာက က​လေး​မွေးပြီးရင်​ကွာရှင်းဖို့ ​ခေါင်းမာတဲ့Nokတစ်​​ယောက်​ Naiရဲ့ ဂရုစိုက်​မှု​တွေ​အောင်​ကျရှုံးမလား ဆက်​ပဲ​ခေါင်းမာပြီးကွာရှင်းမလားဆိုတာ….. Reviewed by Taew Channel Translated by Myat Noe Encoded by Lwin Naung
Game Sanaeha (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး EP 9-1 နောက်လူကြည့်ရအောင် up ပေးခဲ့ ဇာတ်​လမ်း​အကျဉ်း​လေးက​တော့ Nok(P’Taew)ကလှပထက်​မြက်​ပြီးခေါင်းမာတဲ့မိန်းက​လေး​တစ်​​ယောက်​ပါ မိဘ​တွေရဲ့ကွာရှင်းပြတ်​ဆဲခဲ့ခြင်း​ကြောင့်​ ဒီ​လိုဖြစ်​​နေတာပါ ဒါတင်​မကပါဘူး Nokရဲ့ဖခင်​ကလည်းငယ်​ရွယ်​တဲ့မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့လက်​ထပ်​ခဲ့ပြီး မိခင်​ကလည်း​နောက်​အိမ်​​ထောင်​ပြုသွားခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​တွေ​ကြောင့်​Nokဟာ အချစ်​ကိုအယုံကြည်​မရှိဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​ Nai(P’James Ji)က​တော့သူ့မိသားစုအရှုပ်​အရှင်း​တွေ​ကြောင့်​ Nokတို့အိမ်​မှာလာ​နေခဲ့ပါတယ်​ (ဘာပြဿနာမှန်း​တော့မ​ပြောထားပါဘူး) Nokက Naiကိုကြည့်​လို့ရ​နေတာ​တော့မဟုတ်ပါဘူး Nok ကို Naiနဲ့လက်​ထပ်​ဖို့အတင်းအကျပ်​ဖိအား​ပေးတဲ့အခါ….(Naiက​တော့ Nokကိုချစ်​​နေခဲ့ပြီ​လေ) လက်​ထပ်​ပြီးတဲ့​နောက်​မှာ​တော့ Naiကိုကွာရှင်းဖို့ပဲ Nokတစ်​​ယောက်​ကြံစည်​မိ​နေခဲ့ပါတယ်​ မထင်​မှတ်​ပဲကိုယ်​၀န်​ရလာတဲ့အခါ Nokတစ်​​ယောက်​ Gameတစ်​ခုဖန်​တီးလိုက်​တာက က​လေး​မွေးပြီးရင်​ကွာရှင်းဖို့ ​ခေါင်းမာတဲ့Nokတစ်​​ယောက်​ Naiရဲ့ ဂရုစိုက်​မှု​တွေ​အောင်​ကျရှုံးမလား ဆက်​ပဲ​ခေါင်းမာပြီးကွာရှင်းမလားဆိုတာ….. Reviewed by Taew Channel Translated by Myat Noe Encoded by Lwin Naung Kyaw Nyein Tun9Oct 2018 · 166K views
Lom Sorn Ruk (Winds Of Hidden Love) Ep5Full NO ENG SUB
Lom Sorn Ruk (Winds Of Hidden Love) Ep5Full NO ENG SUB Delisha Syaf 27 Mar 2019 · 12K views